नायक दिलिपकी छोरी छिन् यती सुन्दर, अब फिल्ममा डेब्यु गर्दै – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Uncategorized/नायक दिलिपकी छोरी छिन् यती सुन्दर, अब फिल्ममा डेब्यु गर्दै
दिलिपकी छोरी छिन् यती सुन्दर, अब फिल्म ‘लक्का जवान’मा डेब्यु गर्दै ! हास्य कलाकार शिवहरी पौडेलले केही हास्य टेलिशृङ्खला त निर्देशन गरिसकेकै हुन् । अब उनले ठुलो पर्दाको चलचित्र निर्देशकको रूपमा पनि दर्शकमाझ आउने भएका छन् । उनको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘लक्का जवान’ को आइतबार राजधानीमा हास्य कलाकार किरण केसीको जन्मदिनको अवसरमा घोषणा गरियो ।
चलचित्रका सह निर्माताको रूपमा किरण र अभिनेता दिलीप रायमाझी रहनेछन् । आमा बङ्गालमुखी फिल्म प्रोडक्सन प्रा।लि।को ब्यानरमा निर्माण हुने ‘लक्का जवान’मा ध्रुव पन्त र अनुसुया श्रेष्ठ पन्तको लगानी रहनेछ । कलाकार र अन्य प्राविधिक पक्षबारे पछि जानकारी दिने निर्माण पक्षले बताएको छ । तर चलचित्र निर्माण घोषणासँगै चलचित्रमा
अभिनेता दिलीप रायमाझीकी छोरी दिव्यालाई डेब्यू गराउने हल्ला फिल्म वृत्तमा चल्न थालेको छ । यस सम्बन्धी जानकारी दिँदै निर्देशक पौडेल दिव्यालाई फिल्मबाट डेब्यू गराउने पहल गरेको र केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउँछन् ।
अमेरिकामा रहेकी दिलीपकी छोरी अभिनयमा इच्छुक रहेको तर अहिल्यै डेब्यु गर्ने नगर्ने उनले बताइसकेकी छैनन । जे होस ढिलो चाडो नायक रायमाझीको छोरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आउनेमा चाँही पक्का छ ।
विदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक प’टक अ’वस्य पढ्नु’होला..
मंगलबार ग्रहचक्रमा ठूलो परिवर्तन, सबै राशिलाई असर ! कुन राशिलाई कस्तो ?
हरेक युवतीको यो क्षण जीवनमा एकचोटी आउनेछ तर रुनु बाहेक अरु केही गर्न सकिन्न,आँसु आउने हरेक चेलीको कथा।